भोलि कार्तिक २७ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक २७ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल!
admin2weeks ago जीवनशैली Leaveacomment 244 Views
तपाईको दिन लाभदायी रहेको छ। व्यापार र व्यवसायमा पनि अपेक्षित सफलता मिल्नेछ । आय वृद्धि हुनेछ । घरको सजा-सजावटमा नयाँपन आउनेछ । सामाजिक प्रसंगमा कतै बाहिर जाने अवसर मिल्नेछ ।
वृष – इ,उ,ए ,ओ,वा,वि,वु,वे,वो (Taurus
नयाँ योजना र विचारधाराको नवीनताबाट व्यपार प्रगतिको दिशामा अग्रसर हुनेछ । कार्य सफलता मिल्नाले विलंब हुन सक्छ ।मध्यान्नपछि व्यपारको अनुकूल वातावरण सर्जित हुनेछ । यसै कार्सीयको लागि कतै बाहिर जानु हुनेछ । पिता र ठुलो मान्छेबाट लाभ हुनेछ ।
खान-पानमा विशेष ध्यान राख्नु हुनेछ । नकारात्मक विचार मनबाट निकाल्नुहोला । अनैतिक र अप्रमाणिक कार्यले विपत्तिमा ल्याउन सक्छ । मध्यान्न पछि मानसिक अवस्थामा कमी आउनेछ । लेखन वा साहित्यिक प्रवृत्तिमा विशेष रुची रहनेछ । व्यापारमा विकास हुनाले नयाँ योजना बनाउनु हुनेछ ।
कर्कट – हि,हु,हे,हो ,डा,डि,डु,डे,डो (Cancer)रहनेछ
कसैसँग भावनात्मक सम्बन्ध बाध्नु हुनेछ र त्यस सम्बन्ध अधिक भावनाशील रहनेछ। यस प्रवृत्तिमा मित्रको सहयोग मिल्नेछ। मध्यान्नपछि तपाईको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ । बोलि उग्वार नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि राम्रो दिन रहेको छ ।
व्यापारको विस्तृतिकरणको हेतुले पैसाको योजना बनाउनको लागि अनुकुल दिन रहेको छ ।धनप्राप्तिको प्रबल योग रहेको छ । व्याज, दलाली आदिद्वारा आयमा वृद्धि होला । आर्थिक रूपबाट आय हुनाले आर्थिक कष्ट टाढा हुनेछ । खानपानबाट मन प्रफुल्लित हुनेछ ।
वस्त्राभूषण किन्नको लागि रोमांचक र आनन्ददयी रहनेछ । कला प्रति तपाईको अभिरुची विशेष रहनेछ । व्यपार विकास हुनाले मनमा आनन्द छाई रहनेछ । व्यवसायमा समय अनुकूल रहनेछ । प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुनेछ ।
तपाई दिन तपाईको लागि मध्यम फलदायी रहनेछ । आमाको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ । परिवारमा झगडा नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । मध्यान्नपछि स्वस्थ अनुभव गर्नाले सिर्जनात्मक प्रवृत्तिमा ध्यान राख्नुहोला । विधार्थीको लागि समय अनुकुल रहेको छ ।
तपाईको दिन व्यवसायको लागि अनुकूल रहेको छ। भाई-बहिनीसँग सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। मध्यान्नपछि कार्यमा प्रतिकूलता वृद्धि हुनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले निराशा अनुभव हुनेछ । परिवारसँग मतभेद हुनेछ । पैसाको हानि होला ।
बोलि र चरित्रमा ध्यान राख्नुहोला । आध्यात्मिक विचार र प्रवृत्तिमा दिनभर मन लागि रहनेछ । मध्यान्न पछि चिन्ता निवारण गर्ने उपाय मिल्नाले मानसिक शान्तिको अनुभव हुनेछ । शारीरिक र मानसिकरुपले स्वस्थता बनिरहनेछ ।
व्यवसायिक क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण मिल्नेछ । तपाईको प्रत्येक कार्य बिना विध्न सम्पन्न हुनेछ । गृहस्थ जीवनमा उग्र वातावरण बनिरहनेछ। आध्यात्मिक प्रवृत्तिमा तपाईको अभिरुचि रहनेछ । कार्यालयमा तपाईको प्रभाव बनिरहनेछ । निर्णयशक्तिको अभाव रहनेछ र घरको कार्यमा पैसा खर्च होला ।
तपाईमा मानसिक रूपले धार्मिक भावनाको उदय अधिक हुनेछ । धार्मिक कार्य अथवा धार्मिक यात्रामा पैसा खर्च हुनेछ । ईश्वरको आराधनाले तपाईको मनमा शान्ति प्रदान गर्नेछ । मध्यान्नपछि तपाईको प्रत्येक कार्य सरलताले पूर्ण हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ ।
विवाहोत्सुकले योग्य पात्र पाउनेछन् । व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि लाभ हुनेछ । पारिवारिक जीवनमा सुख- शान्ति छाउनेछ । मित्रबाट पनि लाभ हुनेछ । मध्यान्नपछि केहि कारणवश मानसिक रूपले चिन्तित रहनु हुनेछ । धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ।
Previous आउदैछ चन्द्रग्रहण : यी राशिलाई पिरोल्छ, बच्न यी कार्य गर्नुहोस्
Next ह’ त्या हुनुअघि २७ पटक आएको त्यो फोन..